Nkọwa:Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha Gas,Ụlọ ọkụ na-enwu ọkụ na gas,Njiri ọkụ na-emepụta ihe ọkụ ọkụ
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 60W Gas Station Canopy Light Fixture IP65
Nke a 60W Gas Station Canopy Light Fitit kwụsịrị ụgwọ kọmputa gị ruo na 76%, 200W HPS / HID dochie ya na 60W ìhè mkpuchi maka ọdụ gas .
Ụlọ ọrụ gas anyị a na-ahọrọ maka oge 50,000 nke ndụ, Die-cast Aluminum Fin lampshade nye obosara ebe dị mma maka ikpo ọkụ.
Mpụpụta lumen nke dị elu 7200Lm site na 120LM / WATT.Our Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Mmiri dị mma iji mee ka ìhè dị n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'èzí.
Anyị na -enwu ọkụ maka ebe gas ejiri afọ ise anyị kpuchie akwụkwọ ikike. Naanị ịkpọ ma ọ bụ zitere anyị ozi maka ngwa ngwa dị mfe.
Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha Gas Ụlọ ọkụ na-enwu ọkụ na gas Njiri ọkụ na-emepụta ihe ọkụ ọkụ Egwuregwu Ngwá Agha Ngwá Ngwá Agha Ngwá Ngwá Ngwá ojii Egwuregwu Ngwá Ike Ngwá Agha Ngwá Ọrụ Ndị Na-eme Ngwá Agha Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ 150w